Prasta Khabar-जाडोमा स्वास्थ्य समस्यामा यसरी जोगिनुस्
जाडोमा स्वास्थ्य समस्यामा यसरी जोगिनुस्
डा. प्रकाश पौड्याल
जनरल फिजिसियन (नेपाल नेसनल अस्पताल)
सामान्यतया चिसो मौसममा वातावरण प्रदूषण हुने र हावामा ब्याक्टेरीया रहने हुँदा अन्य समयको तुलनामा यो समयमा स्वास्थ्य जटिलता धेरै देखिन्छन् । वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिला बढी प्रभावित हुन्छन् । छातीको समस्या भएका व्यक्तिमा रोग बढेर जाने जोखिम रहन्छ ।
कसरी स्वस्थ रहने ?
- चिसो लाग्नबाट बच्नका लागि न्यानो पारेर बस्नुपर्छ । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई पनि न्यायो लुगा लगाइदिनुपर्छ । तर, कोठा न्यानो बनाउँदा उचित भेन्टिलेसन पनि राख्नुपर्छ, अर्थात् कोठा गुम्स्याएर राख्नुहुँदैन ।
- गाउँघरमा न्यानो बनाउन आगो ताप्ने चलन छ । आगो बाल्दा कोठा बन्द राख्नु हुँदैन । धुवाँमा कार्बनमोनोअक्साइड हुने हुदाँ शरीरमा प्रतिकूल असर पर्छ ।
- बालबालिकालाई धेरै बाक्लो लुगा लगाइदिएर गुम्स्याउनुहुँदैन । भित्रभित्रै तातो भएर पसिना आँउछ र त्यसैको चिसोले अन्य समस्या निम्त्याँउछ ।
- बिहानको समयमा हिँड्डुल गर्नुपरेमा बाक्लो लुगा लगाउनुपर्छ ।
- भाइरल संक्रमण भएका व्यक्तिबाट टाढै बस्नुपर्छ ।
- झोलिलो खानेकुरा र भिटामिन सीयुक्त फलफूल बढी सेवन गर्नुपर्छ ।
- छाला सुक्खा हुनबाट बचाउन मोस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । चिसोका कारण धेरै नुहाउने गर्नुहँुदैन । यसले छालामा समस्या देखिन सक्छ ।
- श्वासप्रश्वासका बिरामीले स्वास्थ्यको बढी ख्याल गर्नुपर्छ । केही समस्या देखिएमा चिकित्सकको परामर्श लिन सकिन्छ ।